Boriborintany I : ampisaina ny « Caisse enregistreuse » | NewsMada
Boriborintany I : ampisaina ny « Caisse enregistreuse »
Nanomboka omaly, tetsy amin’ny boriborintany voalohany, ny fanandramana ny antsoina hoe « Caisse enregistreuse », eo amin’ny fandoavam-bola. Niarahana tamin’ny teknisianina avy ao amin’ny tahirim-bolam-panjakana na ny “trésor public” izany.
Raha mahomby ny fampiasana io “caisse enregistreuse” io dia aparitaka manerana ny boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra. Tsiahivina fa tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny asa omena ny vahoaka izany, manatsara ny fidiram-bolan’ny boriborintany sy ny kaominina koa.
Ao anatin’izay fanavaozan’ny kaominina ny fomba fiasa izay ihany, hatomboka amin’ity volana febroary ity koa ny fiandrasan-draharaha amin’ny alina. Tanjona ny hahafahan’ny kaominina mitety ny faritra rehetra hitsirihana ny tsy fanarahan-dalàna. Hiatrehana ny vonjy taitra ihany koa raha sanatria ka mitranga izany.
Iarahana rahateo amin’ny GRC na ny sampana misahana ny fiatrehana ny loza eto amin’ny kaominina izany. Manentana ny fiaraha-miasa amin’ny isam-batan’olona hatrany ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fanarenana an’Antananarivo.
Ao anatin’izay fanatsarana izay ihany, efa manomboka koa ny asa fanitarana ny tsenan’Anosibe.
Raha ny tapaky ny fivorian’ny vaomiera izay natao ny 22 desambra 2016, ny 04 janoary 2017 ary ny 24 janoary lasa teo, natomboka ny alahady maraina teo ny asa fanitarana ny tsenan’Anosibe izay haharitra 3 volana. Vinavinaina ho 50 ireo tsena anaovana ny tetikasa izay iarahana amin’ny orinasa tsy miankina
Mampahatsiahy ny mpanjifa ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa « Marquage au sol” irery ihany no manan-kery rehefa avy nohamarinin’ny tomponandraikitry ny kaominina. Noho izany, tsy manan-kery avokoa ireo « plaques métalliques » na takelaby famantarana hafa apetraka eny rehetra eny.